हामीले निःशुल्क पॉकेट कास्ट अनुभवको परीक्षण गरेका छौ, एक उत्कृष्ट पोडकास्ट अनुप्रयोगहरू मध्ये एक Androidsis
पकेट क्यास्टहरू एक उत्तम पोडकास्ट अनुप्रयोगहरू हुन् र हिजो उनीहरूले घोषणा गरे कि तिनीहरु freemium वा "free" हुन्छन्। अर्को शब्दहरूमा, तपाईंसँग यसको सुविधाहरू, जस्तै डार्क थिम, क्रस-प्लेटफर्म समक्रमण र चल प्लेब्याक गति, सित्तैमा हुनेछ।
यो यसको मतलब यो होइन कि तपाईं पीसी संस्करण प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ सित्तैमा। तिनीहरू नि: शुल्क हुनेहरू एन्ड्रोइड र आईओएस अनुप्रयोगहरू हुन्। पीसी मासिक वा वार्षिक भुक्तानीमा जान्छ केही युरो बचत गर्न पकेट क्यास्टको experience 360० को अनुभवको आनन्द लिन हामी जहाँसुकै मोबाइल उपकरणको साथ छौं। हामी तपाईलाई यो अनुभव सित्तैमा दिनेछौं।
1 फ्रिमियम जाँदै छ
2 योसँग पोडकास्ट अनुप्रयोगमा तपाईले चाहानु हुने सबै चीजहरू छन्
फ्रिमियम जाँदै छ
यो कारणले बुझिन सक्छ अभ्यस्त छ कि लाखौं प्रयोगकर्ताहरू पहिले नै फ्रिमियम छन्, पकेट क्याट्सले सामग्री प्रस्ताव गर्ने यस तरिकामा स्विच गर्ने निर्णय गरेको छ; प्रतिस्पर्धीहरूको एक धेरै विस्तृत सूची सहित। तपाईंलाई थाहा छ यो सेवा सार्वजनिक मीडिया को एक कन्सोर्टियम द्वारा गत वर्ष अधिग्रहण गरिएको थियो, त्यसैले तिनीहरूले freemium जाने निर्णय गरेका छन्।
यसको धेरै जसो सुविधाहरू सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ। मेरो मतलब, हामी अन्धकारको बारेमा कुरा गर्छौं, क्रस-प्लेटफार्म सिंक, म्यूट र गति हटाउने चर प्रजनन। हामी दोहोर्याउँदछौं कि पीसी अनुप्रयोगको सदस्यता मार्फत मासिक वा वार्षिक लागत हुनेछ।
यदि हामी भन्छौ कि यो freemium भएको छ यो किनभने यो प्रीमियम हुनु अघि हो। यसको लागत आईओएसमा $ 5,99। र एन्ड्रोइडमा 3,99 थियो। यो आजबाट हो जब तपाईं कुनै शुल्क बिना अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा प्रीमियमलाई वार्षिक वा मासिक सदस्यतामा पारित गरिएको छ पॉकेट क्याट्स प्लस।
पकेट क्यास्ट प्लसले वेब, विन्डोज र म्याकोस अनुप्रयोगहरूमा पहुँच दिन्छ, क्लाउड भण्डारण र अनुप्रयोगहरूमा विशेष पहुँच र थिमहरू। ओह, र तपाईं तिनीहरू को लागि जसले यसको प्रीमियम चरणको केहि बिन्दुमा अनुप्रयोग खरीद गर्नुभयो, तपाईंसँग सेवामा तीन वर्ष निःशुल्क सदस्यता हुनेछ। कुन पीसी, एन्ड्रोइड वा आईफोनमा, यो अनुप्रयोगको मजा लिन जारी राख्न धेरै नै राम्रो हुन्छ।
योसँग पोडकास्ट अनुप्रयोगमा तपाईले चाहानु हुने सबै चीजहरू छन्
हामी यसको गुणहरू जस्तै यसको अनुक्रमणिका बारे कुरा गर्न सक्छौं, कुन पोडकास्टहरू डाउनलोड र स्वचालित रूपमा अभिलेखमा नियन्त्रण गर्नुहोस्, नियन्त्रण सूचनाहरू र जे पनि एक आसन्न अपडेटमा आउँनेछ: अनुप्रयोग मार्फत स्थानीय रूपमा भिडियो र अडियो फाइलहरू खेल्ने क्षमता। अर्को शब्दहरुमा, यो तपाईको फोनमा मिडिया प्लेयर बन्न सक्छ।
साथै अनुप्रयोग डिजाइन सुधार गरिएको छ र केहि कुराकानीहरू मोबाइल अनुप्रयोगबाट राम्रो अनुभव प्रस्ताव गर्न अनुकूलित गरिएको छ। तपाइँलाई एक विचार दिन अनुप्रयोग प्रविष्टि गर्दै, यसले हाम्रो मनपर्ने पोडकास्टहरूको मोजेक पहुँच गर्न, पोडकास्टहरू, पोडकास्ट फिल्टरहरू र तपाइँको आफ्नो खातामा लग इन गर्न तपाइँको आफ्नै प्रोफाइल पहुँच गर्न तल चारवटा ट्याबहरू प्रयोग गर्दछ।
हाइलाइटहरू हामी विभिन्न विषयहरूको चयन गर्न सक्छौं र आइकन पनि हामी आफ्नो मोबाइलको डेस्कटपमा लग्नेछौं। यसका साथ हामी तपाईंलाई यो देखाउन चाहन्छौं कि पकेट क्यास्टहरू विवरणले भरिएको अनुप्रयोग हो र यसले एक धेरै उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ।
केवल प्लेब्याकमा यो सबै हुन्छ:
तपाईंको नयाँ मनपर्ने पोडकास्टहरूको निरन्तर प्लेब्याक।
एपिसोडको बीचमा साइलेन्स काट्नुहोस्.
एपिसोडको परिवर्तनशील गति।
जब तपाईंलाई यसको आवश्यक हुन्छ आवाजको आवाज बढाउनुहोस् र पृष्ठभूमि शोर हटाउनुहोस्।
स्ट्रिमिङ: फ्लाईमा एपिसोडहरू खेल्नुहोस्।
अध्याय: तपाई सजिलैसँग चाहानु हुने मानिसहरू र पोडकास्ट कभरको बीचमा जानुहोस्।
भिडियो र अडियो: प्ले गर्नुहोस् तपाइँका सबै मनपर्ने एपिसोडहरू।
प्लेब्याक छोड्नुहोस्: परिचयहरू छोड्नुहोस्।
एन्ड्रोइड पोशाक: तपाईंको ब्रेसलेटबाट पोडकास्टहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
Chromecast मार्फत पोडकास्टहरू कास्ट गर्नुहोस् टिभीमा।
Sonos - ब्राउज गर्नुहोस् र Sonos अनुप्रयोगबाट तपाईंको सूची प्ले गर्नुहोस्।
Android Auto: तपाइँको एपिसोडहरू खेल्नुहोस् र तपाइँले खोजिरहनु भएको फेला पार्न तिनीहरूलाई फिल्टर गर्नुहोस्।
त्यसैले हामीसँग पहिले नै प्ले स्टोरबाट पॉकेट कास्टहरू नि: शुल्क छन् सदस्यता सिnch्ख्रोनाइज गर्न, नयाँ एपिसोडहरूको सूचनाहरू प्राप्त गर्न, स्थानीय सुन्नेका लागि ती बारे स्वचालित डाउनलोड, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न फिल्टरहरू र तपाईंको मोबाइलमा भण्डारण नियन्त्रण गर्न। तपाईं आफ्नो अनुभवको परिक्षण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
पकेट क्यास्ट - पोडकास्ट प्लेयर
विकासकर्ता: Automattic, Inc
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » हामीले नि: शुल्क पॉकेट क्यास्ट अनुभवको परीक्षण गर्‍यौं, एक उत्तम पोडकास्ट अनुप्रयोगहरू
हेलिकप्टरहरू PUBG मोबाइलमा आउँदैछन्! शानदार नयाँ पेलोड मोडको लागि तयार हुनुहोस्